Yunnan Xinping Sports Forest Park Field Lighting Project
Ogo nke ọkụ bụ ihe ngosi dị mkpa nke ogo ụlọ ọrụ egwuregwu. Maka ịgba bọọlụ, ọkụ ịgba ama egwuregwu bọọlụ dị oke mkpa. N'oge na-adịbeghị anya, UNIKE rụzuru nke ọma na Xinping County Sports Forest Pa ...
Xiangtan Ime ụlọ Lighting Renovation Project
N'oge na-adịbeghị anya, ọrụ ntughari ohuru nke Hunan Xiangtan Indoor Stadium na-aga nke ọma gafere nnabata ahụ ma tinye ya n'ọrụ, nke ndị ahịa ghọtara nke ọma ma kwenye. UNIKE na-enye azịza nke ọgụgụ isi zuru ezu maka Xiangtan ime ụlọ ...
G ISN IS B SM SMD LED?
Elu Μount Ngwaọrụ, Diodes Light Emited The SMD LED bụ obere pere mpe na ọkụ dị nro nke agbakwunyere na epoxy resin. Ndị a na-enye oke ihie ma na-ejigide ume ọkụ dị ala ma e jiri ya tụnyere ụdị bulbs ndị ọzọ (eg ...